[MAQAAL]: Maxaa Inaga Hortaagan In Aan Doorano Mudaniha Saxda Ah. W/Q: Maxamuud Cabdi Faarax.
Wednesday June 13, 2018 - 00:08:40 in Arrimaha Bulshada by Super Admin
Sida laysku waafaqsanyahay, in laysla leho hawsha la-qabanayo iyo cidii ku haboonayd ( qof leh: aqoontii, xirfadii, musuuliyadii, amaanadii, kartidii, hufnaantii, daacadnimadii, IWM, ee ay u baahnayd hawsha loo igmanayo) waxay laf-dhabar u tahay ka g
Sida laysku waafaqsanyahay, in laysla leho hawsha la-qabanayo iyo cidii ku haboonayd ( qof leh: aqoontii, xirfadii, musuuliyadii, amaanadii, kartidii, hufnaantii, daacadnimadii, IWM, ee ay u baahnayd hawsha loo igmanayo) waxay laf-dhabar u tahay ka guul gaadhida hawshaa. Ka bulsho ahaan had iyo goor waxaynu aad uga cabanaa musuuliyiinta xilka inoo haya heer kastooy tahay; heer qaran, heer gobol, heer degmo IWM. Masuuliyiintani waxay isugu jiraan kuwo la-magacaabo (appointed members) iyo kuwo bulshadu soo doorato (elected members). Hadaba, magacaabistu ha-inoo dambaysee, su'aashu waxay tahay: maxaa inaga hor-taagan inaynu doorano qofkii ehelka u-ahaa hawsha aynu u igmanayno?
Haddaan usoo gondo dego su’aashan jawaabteeda, walow laga-yaabo inay jiraan asbaabo badan oo keenaysa inaan la-dooran shakhsiyadaynu u baahnayn, hadana aragtidayda waxaan isleeyahay dhawrkan qodob ee hoos ku xusan ayaa ugu mudan:
1) Duruufo dhaqaale oo bulshadeena haysta (poverty): Iyadoo marka horeba lagu tilmaamo dalkeena kuwa ugu liida dhaqaale ahaan wadamada dunida, hadana il-dhaqaaleedka ugu muhiimsan ee bulshadeenu ku tiirsanayd wuxuu ahaa XOOLAHA NOOL (livestock). Abaaro laxaadleh oo isdabo-joog ah oo inagu habsaday waayadii dambe waxay keeneen inay xoolihii inaga baxaan, tiir-dhexaadkii dhaqaaleheenuna wuu sidaa ku lumo, ma-naynaan helin qorshe dhawladeed oo lagaga bixi karo dhibkaa. Sidaa awgeed bulshada reer S.land waxay la daalaa-dhacaysaa duruufo dhaqaale xumo oo aad u qalafsan. Taasina waxay keentay inaynaan u maxdax-banaanaan cidaynu dooranayno. waayo siday odhaahdan tajribada aadamaha ka dhalatay leedahay: qof baahani ikhtiyaar malaha ee hadba cidii wax u dhiibta ayuu ku qasbanyahay, ( the beggar has no choice). Odhaah kale oo carbeed baa iyana ahayd: ( MAN YAMLIK QUUTAHU YAMLIK QARAARAHU)oo macnaheedu yahay; qofkii dhuunigiisa haysta ayaa go’aankiisa u madax-banaan oo gaadhi kara. Markale waa kii hal-abuurkii somaliyed lahaa:
·qayrkaa tafta u hoorso iyo gacan la-taagtaana,
·halaguu tashiyo waxay dhashaa amar ku-taaglayne.
Si kooban, dhaqaale xumada haysata bulshadeenu waa caqabada ugu weyn ee hortaagan in aynu u maxdaxbanaanaano cidaynu dooranayno.
2) Qabyaalad ( trabilism/clan supremacy ): waxaa laysla waafaqsanyahay qabyaaladu dibmooyee inaanay dheef lahayn. waa kan timocade (AHN) oo arinkan tilmaamayaa: " dugsi maleh qabyaaladi waxay dumiso mooyaane.” Qabyaaladu waa cudur dilaa ah (lethal disease) oo guud ahaan naafeeyey bulshada somalida. 99% intii dagaal inagaga baxday, wixii hanti ku luntay iyo wixii maamul ku dumay waxay sababsadeen cudurkan dilaaga ah ( tribalism disease ). Inteena joogtana wuxuu ka dhigay dhibanayaal isugu jira sariir-yaal iyo bukaan socod. Sidaa awgeed bulsho bugtaa aayaheeda si sax ah ugama tashan karto. Waakan Raage Ugaas oo tilmaamaya nin bukaa inaanu waxba qabsan Karin. wuxuu yidhi: " ma aarsado il iyo oof nimay iimi kaga taale.”
3) Aqoon-yaraan ( lower literacy level of the voters ): guud ahaan bulshadeena waxaa lagu qiyaasaa dadka aan akhrin, qorina ( illiterate rate ) ku dhowaad 60%. Marka la eego dadka codeeya oo u badan dadka miyiga degan ( rural areas residents ) iyo dumarka ( female/women), tiradu aad bay uga badanaysaa 60%. Taasina waxay keenaysaa inaanay soo bixin cidi loo baahnaa inta badan.
4) Wacyi-gelin la’aan (lower level of awareness): heerka wacyigelineed ee bulshadeenu aad buu u hooseeyaa, hawshaana waxaa gabay baan isleeyahay qolyahan: a) W.warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka. b) warbaahinta gaarka loo leeyahay sida: TV-yada, wargeysyada, websites-ka IWM. c) xurumaha waxbarashada ( educational centres) d) aqoonyahanka oo culimadu uhoreeyaan.
Ugu dambayn, inkastoo caqabadahan iyo kuwo kale oo badaniba inagu gadaamanyihiin, hadana waynu ka bixi karnaa hadaynu rabno, sida odhaahdani leeday: " where there is a will, there is a way.” Walow aynaan haabkeedii haynin sidii aynu xal ugu heli lahayn caqabadahan, hadana lama rajo dhegee waxaan kaga tegay(ku soo gunaanadey):
·mar uunbuu daf soo odhan nabsigii diinku soo sidaye
·mar uunbay daruur caafimaad dooxa soo rogiye
·dirridaa abaarta ah marbuu doog ka soo bixiye
·dibjirka iyo reer miyigu marbay daasadaa qubiye
·markaasaaa la daydayan xaqii naga dahsoonaaye.Abw. Qaasim
W/Q:Mohamoud Abdi Farah